I-Embroidery Kit, i-Embroidery Thread, i-Wood Embroidered Wreath - Yazisa
Ngokugxila Ikhwalithi ephezulu, ukulethwa okusheshayo, ufanelwe okungcono kakhulu.
Isikhwama segolide somlomo
Zithumele, thumela abangani, vumela abantu abaningi ndawonye bahle.
Kwenziwe ngezandla, ukubonakaliswa kwenhliziyo, ukondliwa kokuhle.
Amaphethini afekethisiwe ngesandla a-concave futhi ayindilinga, umbala ogqamile, untekenteke futhi uyinhle, igumbi lokuzenzela elihambayo, gcina izimonyo ezintekenteke nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi, noma yimuphi umcimbi unokukhanya kwawo.
Zonke izinketho zakho zimbozwe lapha. Sinezinto ezifekethisiwe ezibukeka ngamehlo amathathu, amakesi womcamelo, izibuko, izikhwama zemali, izesekeli zezinwele, imigexo, izindandatho, amacici, iziphandla, amaski, iduku, intambo efekethisiwe namathuluzi wokusetha. Ikhwalithi ephezulu, ukulethwa okusheshayo, ufanelwe okungcono kakhulu.
Kwenziwe ngentando efekethisiwe Setha DIY Ezenziwe Ngesandla Ukuthunga C ...
ICHERISH, eyasungulwa ngo-1995, itholakala e-Yiwu, eChina, inhloko-dolobha yezimpahla ezincane emhlabeni. I-CHERISH ingumkhiqizi ochwepheshe onguchwepheshe wokuklama, ukukhiqiza nokumaketha kwemikhiqizo eyenziwe ngezandla ye-DIY. Kule minyaka engama-20 edlule, ngokuklama okuqinile kwenkampani, ukuthuthuka, ikhono lokuqamba izinto ezintsha, ukwakhiwa kwemboni ye-DIY enikeza izinzuzo eziningi. Imikhiqizo yenkampani ekhona: i-Ailuo, i-Aiyouwei, i-CHERISH, i-Cross-stitch, ukudweba kweDayimane, i-Patchwork, i-Embroidery uchungechunge olukhulu lwemikhiqizo inesikhundla esiphakeme emakethe. Ngaphezu kwezitolo ezingama-franchised ezingama-2000 ezweni lonke, imboni yabubona ubuholi. Siyakwamukela ku-CHERISH.
XHUMANA NABANYE ABATHANDI BAMATCHA